Eosinophils - amaseli ethize amhlophe egazi, okuyinto enze eziningi imisebenzi ebalulekile. Ikakhulukazi, zinikeza amasosha omzimba enamandla njengoba ifa izakhiwo cytotoxic. Kodwa kusho ukuthini uma eosinophils anda kakhulu kubantu abadala?
izici omfushane nemisebenzi
Eosinophils - ihlukene granulocytes ne-nucleus bilobed. Ngenxa yalezi amaseli isici ukunyakaza amoeboid, kulula kakhulu ukuba zingene phakathi Imithambo yegazi. Esinye isici esibaluleke zalezi zakhiwo kuyinto chemotaxis - ikhono ukunyakaza esebenzayo ekufezeni izingxenye foci ukuvuvukala noma izicubu umonakalo. By the way, lezi amaseli microphages futhi ukubamba izinhlayiya angaphandle usayizi encane.
Eosinophils kungaba ngenkuthalo uxhumano nomsebenzisi, noma Ngakolunye uhlangothi, ukukhulula histamine kanti ezinye nezinye izinto sasikhipha e inqubo yisihlungu noma awe ukusabela nomzimba. Kunezizathu eziningi ngenxa okuyinto eosinophils anda. Izinga abadala kula maseli zokhahlamba kusuka amayunithi 120 ku 350. microliter legazi ngalinye. Noma yimuphi kuphambuka kungenzeka i-signal inkinga.
Eosinophils anda: Izimbangela
Ngempela, kwephula ngamacala evamile igazi ngokuvamile sibonisa amaphutha ezahlukene emzimbeni. Ngakho uma eosinophils anda (e omdala noma ingane - akunandaba) - ke kuba yisikhathi sokuhlangana ukuxilongwa egcwele. Namuhla isinqumo ukwaba izimbangela ezimbalwa eyinhloko eosinophilia. Lezi yizinto ezimbalwa nje yibo kuyizinto ezivamile:
Ngokuyinhloko-ke Kuhle kokusho mayelana yokungezwani komzimba. Ngempela, njengoba isivele wathi, eosinophils uxhumano nomsebenzisi kalula noma ukudedela histamine, okuyinto ukwandisa ezingeni ke kuholela ukubonakala izimpawu eyinhloko enjalo ukuqubuka kwesikhumba noma edema mucosal. Phela, lolu hlobo amangqamuzana amhlophe egazi unekhono kokubili sokumisa futhi kwethulwa indlela komzimba nezinto. Lezi zihlanganisa isifuba somoya, rhinitis iguliswa futhi ethimulisayo, dermatitis atopic, ezifweni anda ezithile izidakamizwa izingxenye.
Uma eosinophils igazi ephakeme, kungase kukhombise khona isifo yisinanakazana, njengoba omunye wemisebenzi kwamangqamuzana egazi zenzelwe ukunikeza amasosha omzimba antiparasitic. Akumangazi ukuthi eosinophilia eba ngokumelene isizinda ascariasis, umalaleveva, trichinosis, opisthorchiasis, giardiasis, nokunye. D.
Izinqubo of isimila ukwakheka nokukhula ngokuvamile iholela ukwanda inombolo cell. Lezi zihlanganisa wegazi, eritremii namanye izifo.
Against ngemuva ezithathelwanayo futhi ngokuvamile baphawula eosinophilia.
Izinkinga kwesimiso somzimba sokuzivikela ngokuvamile kuthinte ifomula legazi, ngoba granulocytes ayingxenye ebaluleke kakhulu ukuzivikela.
Umphumela efanayo ukukhubazeka ezithile inhliziyo, zezinzwa izicubu iziyaluyalu, isibonelo, i-rheumatoid arthritis.
Ezingeni amazinga igazi eosinophils kungathinta yokwamukela izidakamizwa ezithile, ikakhulukazi lezo eziqukethe beta-blocker, penicillin akuzange kusize, amahomoni, chymotrypsin, sulfonamides kanti ezinye nezinye izinto.
Njengoba ubona, eosinophils ephakeme e abadala ngenxa yezizathu ezahlukene ngokuphelele, ngakho i ukusazi ngokunembile isifo esikuphethe kuyadingeka ukuqoqa umlando, ujwayelene izimpawu kanye nezikhalo lesiguli, kanye ubamba uchungechunge cwaningo eyengeziwe kanye izifundo.